Koobka koobabka Jeneral Da.uud oo Maanta furmi doona kana duwan Sanadihii hore? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Koobka koobabka Jeneral Da.uud oo Maanta furmi doona kana duwan Sanadihii hore?
Published on September 20, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(21-9-2018) Maanta waxaa sirasmi ah u furmi doona koobka koobabka Jeneral Da.uud kaas oo ay ka qayb gelayaan 16 kooxood oo heerar kala duwan ah waxaana koobkaan uu yahay mid lagu xusu Taliyihii ugu horeeyey Ciidanka dalka Soomaaliya Jeneral Da.uud Cabdule Xirsi alaha u Naxariistee.
Kulanka ugu horeeya koobka Jeneral Daa.uud waxaa lagu furi doona kooxda ku cayaarta Magaca Ciidanka Milatariga Soomaaliya ee Horseed iyo Naadiga Jeenyo waxaana halkaa ka dhici doona Cayaar aad u adag maadaama labada Naadiba soo galeen diyaar garoow adag.
Gudoomiyaha kooxda Horseed Col. Maxamed Axmed Xasan (Ditoorka) ayaa Shabekda qalinkacayaaraha u sheegay in Sanadkaan uu yahay mid ka duwan sanadihii hore ee lacayaari jirey koobka Jenaral Daa.uud isla Markaana dhamaan madaxada Ciidanka Xooga dalka Soomaaliya ay siin doonaan muhiimad Gooni ah iyaga oo sidoo kale ku bixin doona abaal marino qaali ah.
Diyaargaroowga koobka Jenaral Da.uud ayaa aad looga dareemayaa Magaalada Muqdisho Gaar ahaan Garoonka lagu Cayaari doono ee koonis kaas oo lagu xardhay hal ku dhegyo qoraalo iyo Sawiro muujinaya muhiimada uu Ciidanka Xooga dalka Soomaaliya ulahaa Jenaral Daa.uud Cabdule Xirsi kaas oo la.aantiis uusan dhismeenCiidan Soomaaliyeed oo xoog leh waxaana uu mudanyahay in lagu xuso Goob kasta oo ay joogaan dad Soomaali ah.